भत्ताभोगी सांसदले फेरी मागे दसैंभत्ता – Rapti Khabar
भत्ताभोगी सांसदले फेरी मागे दसैंभत्ता
संघीय संसद्का सांसदले दसैंभत्ता मागेका छन् । जनताको सेवा गर्न भनेर जनता बाटै चुनिएका सांसदले मासिक पारिश्रमिक त लिएकै छन् । त्यसको अलावा भत्तामा पनि र्याल कार्दै आएका छन् ! यसरि उनीहरु कर्मचारीसरहको भत्तामा पनि लोभिएका छन्, यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
उनीहरुको मागप्रति अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पनि सकारात्मक देखिएका छन् । श्रमिकदेखि कर्मचारीसम्मले दसैंमा एक महिना बराबरको भत्ता पाउने तर आफूहरुले किन नपाउने भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए ।
सांसद र तिनका सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीले दसैंभत्ता नपाउने गरेका कारण समस्या भएको सांसदहरुको तर्क छ । बेलाबखत सांसदको भत्ता काण्ड आलोचनाको निशानामा पर्दा समेत सांसदहरु भत्तामा र्याल चुहाउन नछाडेको भन्दै जनमानसमा तिब्र आलोचना भैरहेको छ । तिब्र आलोचनाको बीच पनि सांसदहरु भत्तापाउन पटक पटक हरेक बर्ष भिभिन्न शिर्षकमा भत्ता माग गर्दै आएका छन् ।
यो पनि पढ़नुहोस
‘दीपक मनाङ्गे’को नेकपामा इन्ट्री
१९ असार, पोखरा । दीपक मनाङेका नामबाट चर्चित गण्डकी प्रदेश सभाका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ बिहीबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रवेश गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश इन्चार्ज पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजीवलाई स्वागत गरे ।
स्वतन्त्र सांसद राजीवको प्रवेशसँगै गण्डकी प्रदेश सभामा नेकपाको दुईतिहाई बहुमत पुगेको छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा अब नेकपाको संख्या ४० पुगेको छ ।
तत्कालीन एमालेका २७ र माओवादीले १२ सदस्य गरी संसदमा ३९ सदस्यीय बहुमतमा नेकपा थियो । गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस १५, जनमोर्चा ३ र नयाँ शक्तिको २ सिट छ । जनमोर्चाका सांसद टेकबहादुर घर्तीको निधन भएपछि उपनिर्वाचन नहुँदासम्म एक सिट रिक्त छ । मनाङको प्रदेशसभा ख बाट निर्वाचित राजीवको इन्ट्री नै यस्तो भयो की नेकपालाई दुईतिहाई बहुमतको सुविधा मिल्यो । राजीवको प्रवेशसँगै गण्डकीमा नेकपालाई बहुमत मिलेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले खसी व्यक्त गरे ।
मनाङ प्रदेश सभा ख तत्कालीन एमालेको भागमा परेको थियो । अन्तिममा आएर उम्मेदवारी फिर्ता लिँदै राजीवलाई नै एमालेले समर्थन गरेपछि उनी स्वतन्त्र सांसदको रुपमा निर्वाचित भए ।
तर, ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी पुरानो मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसलाका कारण सपथ लिन पाएनन् । उनी ८ महिना जेल बसे । पछिल्लो मुलुकी ऐनको १९४ मा १० वर्षसम्म कैद सजाय पाएका व्यक्तिले जमानत बुझाएर थुनाबाहिरबाटै मुद्दा लड्न पाउने सुविधा दिएको छ । त्यही सुविधा प्रयोग गर्दै राजीव थुनामुक्त भएपछि गत मंसिर १२ गते बिहीबार प्रदेश सभा सचिवालयमा सपथको लागि निवेदन दिएका थिए ।
त्यसको एक महिनापछि बल्ल सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले गुरुङले उनलाई सपथ खुवाएका थिए ।
राजीवसँगै बिहीबार विप्लव नेतृत्व नेकपाका कास्की सचिवालय सदस्य तथा माछापुच्छ्रे इन्चार्ज पुष्प कार्की पनि नेकपा प्रवेश गरेका छन् । उनले ५२ सालदेखि भूमिगत जीवन बाँचेको र अहिले पार्टी प्रतिवन्धको अवस्था पनि नेकपामै रहेको बताउँदै अब नेकपाले नै विकास गर्ने बताएकाले प्रवेश गरेको भनाइ राखे ।
कार्यक्रममा विप्लव समूहका माछापुच्छ्रे गाउँपालिका इञ्चार्ज पुष्प कार्की पनि नेकपामा प्रवेश गरे । कार्यक्रममा कार्कीले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको अभियानमा सामेल हुन नेकपामा प्रवेश गरेको बताए ।
मन्तव्यको क्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले विप्लव समूहका सबै व्यक्तिलाई नेकपामा आउन आह्वान गरे । ‘कुन्ठाको आधारमा आतंक फैलाउने काम राम्रो होइन, सबै विप्लव समूहका व्यक्तिलाई नेकपा प्रवेश गर्न अनुरोध गर्छु,’ उनले भने, ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालका लागि अर्काे विकल्प छैन ।’
उनले कम्युनिस्ट पार्टीमा फुट आए पनि संघीयता र समृद्ध नेपालका लागि सतिसाल झैं उभिनु ठूलो भएको बताए ।
दीपक मनाङ्गे होइन, राजीव गुरुङलाई पार्टी प्रवेश गराएको हुँ : मुख्यमन्त्री गुरुङ
दीपक मनाङ्गेलाई बिहीबार पार्टी प्रवेश गराउँदै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेकपा गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ।
१९ असार, पोखरा । दीपक मनाङ्गे भनेर चिनिने गण्डकी प्रदेश सभाका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रवेश गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश इन्चार्ज पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गुरुङलाई पार्टी प्रवेश गराएका हुन् । मनाङ्गे, मनाङको प्रदेशसभा ख बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।
वाम गठबन्धनको भागवडामा यो निर्वाचन क्षेत्र तत्कालीन एमालेको भागमा परेको थियो । तर अन्तिममा आएर एमालेले उम्मेदवारी फिर्ता लिँदै मनाङ्गेलाई नै समर्थन गरेको थियो ।
चुनाव जितपछि ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी पुरानो मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसलाका कारण सपथ लिन पाएनन् । उनी ८ महिना जेल बसे । पछि मुलुकी ऐनको १९४ मा १० वर्षसम्म कैद सजाय पाएका व्यक्तिले जमानत बुझाएर थुनाबाहिरबाटै मुद्दा लड्न पाउने सुविधा प्रयोग गर्दै उनी जेलबाट छुटे । जेलबाट छुटेको एक महिनापछि सपथ खाएका उनी त्यसबेला नै नेकपा प्रवेश गर्ने अनुमान थियो ।
मनाङ्गेको पार्टी प्रवेशले गण्डकी प्रदेशमा नेकपाको दुई तिहाई पुगेको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए । यसले नेकपालाई अझ सहज हुने उनको भनाइ थियो ।
साथै नेकपाले दीपक मनाङेलाई नभई, प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरूङलाई पाटीै प्रवेश गराएको उनले बताए । सुध्रन्छु र देशको समृद्धि र विकासमा लाग्छु भन्नेहरुका लागि नेकपा खुला रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘जो कोही पनि सुध्रन चाहन्छु, देश बनाउन चाहन्छु भन्नेहरू नेकपामा आउन सक्छन् ।’
अब वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था खोज्दै अब अरू पार्टीमा बसिरहनु नपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘नेकपा नै विकल्प हो । विप्लवहरूले भनेको मुख्य शत्रु को हो ’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘कुन्ठाको आधारमा आतंक फैलाउने काम राम्रो होइन, सबै विप्लव समूहका व्यक्तिलाई नेकपा प्रवेश गर्न अनुरोध गर्छु ।’ – onlinekhabar.com
यी हुन् काठमाडौंका ५ कोरोना ‘हटस्पट’
Posted on August 20, 2020 Author Rapti Khabar
भदौ ४, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा कोरोनाभाइरस संक्रमण दर बढ्दै गएको छ। बिहीबारसम्म महानगरमा १ हजार १ सय ९१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने ६ जनाको ज्यान गइसकेको छ। यो खबर यज्ञराज जोशीले नेपालखबरमा लेखेका छन् । उपत्यकाको कोटेश्वर क्षेत्र सबैभन्दा बढी जोखिममा देखिएको छ। त्यसपछि बल्खु, कलंकी, बालाजु, महाराजगञ्ज तथा असन क्षेत्रमा […]
कोरोना संक्रमितले फेसबुक लाइभ गरेपछि…
प्रशन्न पोखरेल/भदौ ५, काठमाडौं । मलेसियाबाट फर्केको केही दिनमा संखुवासभाका सुजन घिमिरेलाई कोरोना देखियो। क्वारेन्टिनमा रहेका अरूलाई संक्रमण नफैलियोस् भनेर धर्मदेवी नगरपालिका वडा नम्बर ४ पिलुवाखोलाको क्वारेन्टिनबाट उनीसहित अर्का एक जनालाई नजिकैको अर्को कटेरोमा सारियो। बालुवा भएको भुइँ, प्लाइउडको खाट, जस्तापाताले छाएको कटेरोमा चार दिन बसिसकेका उनीहरूलाई आइसोलेसनमा सार्नेबारे कुनै तयारी देखिएन। अति भएपछि सुजनले […]
जिटुजी प्रक्रियाबाट इजरायल जान पाइने, नेपालीले के-के सुविधा पाउँछन ? हेर्नुस
Posted on September 25, 2020 September 25, 2020 Author Rapti Khabar
असोज, काठमाडौं । नेपाल सरकार र इजरायल सरकार विच श्रम सम्झौता हुने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालीको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा मानिएको इजरायलसँग श्रम सम्झौता गर्न इजरायलका लागि नेपाली राजदूत डा अञ्जान शाक्यलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको पररषट्रमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिए । नेपाल र इजरायल सरकारको संयन्त्रमार्फत रोजगारीमा पठाउने […]
म भेडो !